क्यान्सर अस्पताल गर्व गर्न लायक बनेको छ : डा. आचार्य | Safal Khabar
क्यान्सर अस्पताल गर्व गर्न लायक बनेको छ : डा. आचार्य
सोमबार, ०३ मंसिर २०७५, १६ : २८
चितवन । सत्र वर्षदेखि भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सेवारत डा. विजयचन्द्र आचार्य अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक हुन् । अस्पतालको कन्सल्टेण्ट गाइनेअंकोलोजिष्ट (एघारौँ तह) मा कार्यरत डा. आचार्यले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको १८ महिना पुगेको छ । डेढ वर्षमा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्ने डा. आचार्य विगतलाई हेर्दा अहिले क्यान्सर अस्पताल गर्व गर्न लायक बनेको बताउँछन् ।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले क्यान्सर रोकथाम र उपचार सेवा दिँदै आएको छ । अब यो अस्पताललाई नेशनल क्यान्सर इन्स्टिच्युट बनाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनु पर्ने समय आइसकेको डा. आचार्यले बताए । क्यान्सरको उपचारका लागि विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले यस अस्पताललाई नेशनल क्यान्सर इन्स्टिच्युट बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
२०३१ साल असोज २५ गते चितवनको गीतानगरमा जन्मिएका डा. आचार्य आमा पद्मादेवी आचार्य र बुबा रामचन्द्र आचार्यका दुई सन्तानमध्ये कान्छा हुन् । दाजु उदय आचार्यसँगै डा. आचार्यले प्रारम्भिक शिक्षा गीतानगरकै अरुणोदय माध्यमिक विद्यालयबाट हासिल गरे । २०४७ सालमा शिवनगरस्थित नारायणी विद्या मन्दिरबाट एसएलसी दिएका डा. आचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट २०५१ सालमा स्वास्थ्य विज्ञानमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र २०५७ सालमा एमबीबीएस (ब्याचलर अफ मेडिसिन, ब्याचलर अफ सर्जरी) गर्नुभयो । पढाई सिध्याएपछि २०५७ सालमा पाल्पाकी मञ्जु शर्मासँग लगनगाँठो कसेका डा. आचार्यका दुई छोरा छन् ।
एमबीबीएस तहको पढाई सिध्याएपछि २०५८ सालमा मेडिकल अफिसरका रुपमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवामा प्रवश गरेका डा. आचार्यले केही समयपछि छात्रवृत्तिमा एमडी (डाक्टर अफ मेडिसिन) तहको अध्ययन गर्ने मौका पाए । उनले चीनको सनयात्सेन विश्वविद्यालयबाट क्यान्सर विषयमा एमडी गरेर फर्केपछि क्यान्सर अस्पतालको गाइनेअंकोलोजी विभागमा काम गर्न सुरु गरे । उनको काँधमा अहिले अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी छ, जसलाई उनले राम्रैसँग पूरा गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यसँग क्यान्सर अस्पतालको पछिल्लो अवस्था, उपचार सेवा र व्यवस्थापकीय पक्षबारे गरिएको कुराकानीको केही अंश :
ठीक छ ।
क्यान्सर अस्पतालो अवस्थाचाहिँ के छ ? कत्तिको बिरामी छ ? कत्तिको स्वस्थ छ ?
क्यान्सर अस्पताल आफैमा एकदम स्वस्थ छ ।
विगतमा क्यान्सर अस्पताल आफैलाई क्यान्सर लाग्न लाग्या हो कि, बेथितिका ट्युमरहरु पलाएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो । तपाईं एक सर्जन पनि हुनुहुन्छ, ती ट्युमरहरुको सर्जरी कति गर्नुभयो ?
किन त्यस्तो भनिएको होला जस्तो लाग्छ । अहिले विगतको जस्तो अवस्था छैन । हाम्रो टिमले बेथितिका ट्युमरहरुको राम्रैसँग सर्जरी गरेको छ । विगतको अवस्था फेरिएको छ ।
तपाईंले अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्न सुरु गरेपछि नौ महिनाभित्र देखिने गरी परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको थियो । तपाईंले कार्यभार सम्हाल्दाको बेला र अहिले अस्पतालको अवस्था कस्तो छ ?
मैले कार्यकारी निर्देशकको कार्यभार सम्हाल्दा अस्पतालमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचेर काम सुरु गरेँ । त्यसै अनुसार परिणाम पनि आएको छ । सेवाग्राही र राज्यको अपेक्षा अनुसार शतप्रतिशत नहोला तर आशा गरे अनुसारको परिणाम आएको छ ।
वार्षिक एक लाख २५ हजार जना बिरामीले ओपीडीबाट सेवा लिएका छन्, जसमध्ये १० हजार जति नयाँ क्यान्सरका बिरामी भेटिएका छन् । क्यान्सर रजिष्ट्री कार्यक्रम देशभरका १२ वटा अस्पतालमा रहेकोमा बढाएर १५ वटा अस्पतालमा पु¥याएका छौँ । क्यान्सर रोकथाम अन्तर्गत स्क्रिनिङको कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ ।
अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीको संख्या र अस्पतालको आय बढेको छ । नयाँ भवनमा शैया र शल्यक्रियाका लागि अप्रेशन थिएटर थप गरिरहेका छौँ । नर्सिङको पढाई सुरु गरेका छौँ । समग्रमा भन्नुपर्दा क्यान्सर अस्पतालमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।